सीमित देयता कम्पनी (LLC) सूचना
एक सीमित दायित्व कम्पनी, वा LLC एक व्यापारिक संगठन संरचना हो जसले केही सदस्यहरूको लागि अनुकूलित कर उपचारको साथै अनुमति दिन्छ "सदस्य" को लागि व्यक्तिगत दायित्व सुरक्षा। यो ध्यान दिनु आवश्यक छ कि विशेष ढाँचा र स्थिति राज्य बाट भिन्न हुन सक्छ राज्यको कानुनमा पूर्ण विचार, जसलाई LLC बनाइनेछ त्यो महत्वपूर्ण छ।
व्यापार संरचना मोडेलको रूपमा एक LLC बहु मालिकहरू, वा "सदस्यहरू" र "एक प्रबन्धक सदस्य" को लागि सीमित दायित्वको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ। प्रबन्धक सदस्य सामान्यतया संगठनको अङ्क हेड हो र यसको व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार छ। व्यापार संगठनको मुनाफा वा हानि प्रत्यक्ष रूपमा सदस्यको व्यक्तिगत आयकर रिटर्न (आईआरएस फारम 1040) मार्फत पास हुन्छ। LLC ले फारम 1065 फाइल गर्दछ, त्यसपछि आईआरएस फारम K-1 मा प्रत्येक सदस्यको करयोग्य मुनाफा सूचीबद्ध गर्दछ। LLC को शुद्ध मुनाफा सदस्यहरु द्वारा आय अर्जित गरेन (को लागी यो एक विशेष "फ्रिंग फायदा" उपचार को रूप मा - देख्न को लागी यो हुन सक्छ को लागी हुन सक्छ), र यसैले स्व-रोजगार को लागी कर अधीन छैन।
LLC को लाभ
एक LLC सदस्यहरूको असीमित संख्याको लागि अनुमति दिन्छ; तथापि, यदि LLC सँग एक मालिक हो (सदस्य), यो एक मात्र मालिकानाको रूपमा कराईनेछ।
एलएलसीले "विशेष आवंटन" मुनाफा को लागि अनुमति दिन्छ - सदस्य मुनाफा र घाटा को असामान्य विभाजन (स्वामित्व को उनको प्रतिशत प्रतिशत भन्दा अलग मा)। यसको अर्थले सदस्यहरूले व्यक्तिगत स्वामित्व प्रतिशत भन्दा बढी लाभ (र घाटा बन्द गर्ने) को लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन्।
सदस्यहरूले सीमित दायित्वको आनन्द लिन्छन्, जसको अर्थ तिनीहरू प्राय: LLC को कुनै पनि दायित्व र सफल निर्णय, साथ नै LLC आफैबाट मात्र व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षित छन्।
शुद्ध मुनाफा को सदस्यों को शेयर को प्रबंधन को कमाई आय को लागी मानिन्छ किनकि प्रबंधक सदस्य एक सक्रिय मालिक मानिन्छ - यसैले प्रबंधक सदस्य को विशेष "फ्रिंज फायदा" उपचार को लागि योग्यता।
एलएल-लाइनको सदस्यको अंश ("नेट") LLC को मुनाफा कमाई आय मानिन्छ, र त्यसैले स्वयं स्व रोजगार कर अधीनमा छैन।
सदस्यहरूले क्षतिपूर्ति वा ग्यारेन्टी भुक्तानीको वितरणको प्रयोग गरी क्षतिपूर्ति गरे। लाभको वितरण प्रत्येक सदस्यलाई मात्र लेखन लेखन जाँच गरेर अनुमति दिन्छ - जब पनि उनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ (प्रदान गरिएको व्यवसायमा उपलब्ध नगद छ)। ग्यारेन्टी भुक्तानीहरूले सदस्यहरूलाई कमाएको आयको प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसैले तिनीहरूलाई उनीहरूले कर-पक्षयुक्त "फ्रिडा फाइदाहरू" को फाइदाहरूको आनन्द उठाउन योग्यता पाउँछन्।
एलएलसीको प्रबन्धक सदस्यले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियमको 100% कटौती गर्न सक्छ वा उनीहरूले LLC को शुद्ध मुनाफाको प्रो-रिटा शेयरको सीमा सम्म पुग्दछन्, किनभने लाभ कमाई आय मानिन्छ। नोट: यदि सदस्यले आय कमाएको छ भने, त्यो पनि योग्य हुनेछ।
एक निगम एक LLC को सदस्य हुन सक्छ। यसले तपाईंलाई एक अतिरिक्त स्तरको स्वामित्व सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, जुन इकाई सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको छ जुन यस्तो पारंपरिक "फ्रिई फाइदाहरू" प्रस्ताव गर्न सकिन्छ र सेवानिवृत्ति योजनाहरू र दायित्वबाट थप सुरक्षाको सुरक्षाको रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ।
एक सदस्यको रूपमा, तपाईं LLC मा राजधानी वा अन्य सम्पत्तिहरू योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, वा व्यापारमा डलर वा मूल्य राख्न LLC पैसा लिनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो ऋण (अधिक ब्याज), लाभ को एक वितरण वा एक भुक्तानी भुक्तानी लिने गरी डलर बाहिर लिन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै सदस्यहरू मर्छन् भने, LLC अस्तित्वमा रहन सक्दछ - सबै बाहेकका सदस्यहरूको सहभागितामा सकारात्मक मतदान गर्ने विषय।
LLC को हानिकारक
मुनाफाको प्रत्येक सदस्यको प्रो-रेटा शेयरले कर योग्य आय को प्रतिनिधित्व गर्दछ - मुनाफा को एक सदस्य को हिस्से मा उनको वा वितरित हुन्छ या नहीं।
LLC को तल-लाइन मुनाफा को प्रबन्धक सदस्य को कमाई आय को रूप मा मानिन्छ, र यसैले स्व-रोजगार को लागी कर अधीन हो।
तल्लो-लाइन मुनाफा को सदस्य साझा को कमाई आय को लागी नहीं मानिन्छ किनकी सदस्यहरु लाई निष्क्रिय मालिक मानिन्छ। त्यसैले, सदस्य विशेष कर-पक्षी "फ्रिङ्ग फाइदा" उपचारको लागि योग्य छैन।
LLC को एक सदस्यको रूपमा, तपाईलाई आफैलाई वेतन तिर्न अनुमति छैन।
यसबाहेक, एलएलसीले अन्य व्यवसायिक ढाँचाहरूमा केही फाइदाहरू साझेदारी गर्दछ - उदाहरणका लागि, जब एक उप-अध्याय "एस" निगमले धेरै संरक्षण र सम्पत्ति वितरण सुविधाको लागि अनुमति दिन सक्दछ, तिनीहरू 75 "स्टकहोल्डरहरू" मा सीमित छन् र यो स्टकहोल्डर एक निगमको रूपमा हुनसक्छ र न त आईआरए (एक एलएलसीको सीधा विपरीत हो जसले निगम "सदस्य" को रूपमा अनुमति दिन्छ) - यसैले साना संगठितहरूलाई यो विकल्प सीमित गर्न वा किनेब्याक वा स्टकहोल्डरहरू कि ती संगठनहरूका लागि कन्वर्ट गर्न चाहने ।
LLC गठन वा सीमित दायित्व कम्पनी संगठनको मुख्य कारणहरू कानुनी सुरक्षाको लागि अलग-अलग कानूनी इकाई बनाउन, मुक्ति संरक्षण, प्रमाण, कर बचत, कटौती योग्य कर्मचारी लाभहरू, सम्पत्ति संरक्षण, गुमनामता, सहजतामा कमी, व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि अलग-अलग संस्था बनाउँदछ। एकमात्र मालिकत्व भन्दा बाहिरको शक्तिहरूको दायरा, सानो दावी अदालत फायदाहरू, कर्पोरेट ऋणहरूका लागि अलग दायित्व र निरन्तर अवधि। LLC गठन या LLC समावेश पछि तपाईं एक अलग कानूनी व्यक्ति बनाउछन। तपाईं शेयरहोल्डर हुनुहुन्छ। तपाईं निगम नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, जब तपाईंको व्यवसाय सुचारु हुन्छ तपाई एक LLC वा LLC गठन बनाउन पछि व्यक्तिगत रूपमा मुक्ति पाउनदेखि सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यक्तिगत देयता कम गर्न
जब तपाईं LLC वा LLC समावेशीकरण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंले एक व्यक्तिबाट अलग व्यक्ति सिर्जना गर्नुहुन्छ वा यसको स्वामित्व लिनुहुन्छ। यसकारण, जब LLC बनाउन वा तपाईंको LLC समावेशीकरण सुरू हुन्छ, त्यहाँ मालिकहरू (सदस्यहरू) र व्यक्तिगत दायित्वका प्रबन्धकहरूको सुरक्षा गर्न कानूनमा प्रावधानहरू छन्। एकपटक जब तपाईं सार्वजनिकसँग व्यापार गर्नुहुन्छ वा एक कर्मचारी पनि हो भने तपाई कानूनी दायित्वमा खुल्ला हुनुहुन्छ। वर्ष पछि वर्ष हामी हजारौं हौं जसले हामीले हाम्रो असंगठित व्यवसायसँग व्यक्तिगत दायित्वको कारण लगभग सबै चीज गुमाउँछौं। यसको अतिरिक्त, LLC गठन पछि एकपटक यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको व्यवसाय निश्चित, अपेक्षाकृत सरल, औपचारिकताहरू पछ्याउँछ ताकि यो देखिन्छ र अलग कानूनी संस्था जस्तै काम गर्दछ। कसैले यस दायित्व सुरक्षालाई अझ बढि विस्तार गर्न सक्छ श्रृंखला LLC, जो एक फरक कम्पनी कोबबी-छेद संग एक कम्पनी हो।
LLC कर लाभ बनाउँदै
एक LLC गठन गरेपछि अधिक कर कटौती व्यवसायहरूको तुलनामा LLC होइनन्। जब तपाईंले सीमित दायित्व कम्पनी गठन गर्नुहुने फाइदाहरूको केहि उदाहरणहरू मेडिकल व्यय, पेंशन योजना, व्यापार यात्रा र मनोरञ्जन समावेश गर्दछ। यो रिपोर्ट गरिएको छ कि समूह कर लेखा परीक्षण को उच्चतम प्रतिशत हो जसमा स्व-नियोजित द्वारा दायर गरिएको अनुसूची "सी" समावेश छ। LLC निगमको लेखा परीक्षा दर स्व-नियोजित भन्दा धेरै कम छ। तपाईं आफ्नो LLC द्वारा नियोजित र कार्यरत हुन सक्छ समय समयमा एक साथ सहभागिता, यस प्रकार, दायर आईआरएस कर कागजातहरूको सूचीबाट अनुसूची "C" स्व-रोजगारी फिर्ती मेटाउने। आईआरएसले कर कटौतीको सन्दर्भमा एक LLC र LLC गठन गठन गरेपछि अधिमान्य उपचार दिन चाहन्छ।
कटौती योग्य कर्मचारी लाभ
जब तपाईं एक LLC बनाउनुहुन्छ तपाईं आफ्नो र आफ्नो कर्मचारीहरूको लागि कर कटौतीको एक विस्तृत array को लागि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। एलएलसी वा एलएलसीको गठन गरी एक व्यक्ति पनि स्वास्थ्यको कटौती कटौती, यात्रा कटौती, मोटरबजार कटौती, मनोरञ्जन कटौती, मनोरञ्जन सुविधा र अन्य धेरै अधिक लाभकारी लाभहरूको आनन्द लिन सक्दछ। सबैभन्दा बढी लाभकारी कटौती पेंशन योजना वा 401K हो। ठीक तरिकाले संरचित पेंशन योजना मा राखिएको पैसा कर कटौती योग्य छ र रकम सेवानिवृत्ति को लागी कर मुक्त हो। यी बकाया फाइदाहरू मात्र LLC बनाउन वा तपाईंको LLC फारममा धेरै समयका लागि तिर्न सक्छन्।
LLC र सम्पत्ति संरक्षण
एक मुकदमा सामान्यतया दुई दिशाको एकबाट आउँछ: व्यवसाय वा व्यक्तिगत। जब तपाईंको व्यवसाय सुचारु हुन्छ - कसैले फिसाउन र व्यवसायको स्थानमा बिस्तारै, कामको समयको समयमा एक मोटरसाइकल दुर्घटनामा ल्याउदा, उदाहरणका लागि - त्यहाँ कानूनहरू छन् भने वा कि LLC वा LLC निगम बनाउन तपाईंलाई मुकदमा हुन सक्छ। व्यक्तिगत रूपमा। तथापि, जब तपाईं व्यक्तिगत रूपमा सुचारु हुनुहुन्छ - गैर-कामको घण्टाको समयमा एक मोटरब्याक दुर्घटनामा र तपाईंको बीमा कवरेज भन्दा बढीको लागि मुकदमा लिइरहँदा, उदाहरणका लागि, बनाइएका LLC वा LLC फारमले राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। एउटा LLC बनाउँदै सदस्यहरू छन्। LLC समावेश सहभागी छ। कर्पोरेट कानून तपाईंको स्टकलाई व्यक्तिगत मुकदमामा भत्किएको अनुमति दिन्छ। यसको विपरीत, व्यवस्थामा प्रावधानहरू छन् कि जब तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा स्वीकारेको छ भने, तपाइँको LLC मा तपाईंको सदस्यता तपाईंबाट हटाइने देखि सुरक्षित हुन सक्छ। यो एक कारण हो किन गठन ए LLC अचल सम्पत्ति जस्तै कि सम्पत्ति को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प भएको छ।
LLC र अज्ञातता
तपाईंको आफ्नै नाममा सम्पत्तिको मालिक, जस्तै व्यापार, एक लगानी सम्पत्ति वा एक मोटरसाइकल, एक एक को खोज खोजी को लागि एक आसान लक्ष्य प्रदान गर्दछ। मुकदमा सुरू गर्नु अघि, एटेरिअर्डरको सम्पत्ति सम्पत्ति खोज गर्न यो सामान्य हो। यदि कुनै सम्पत्ति तपाईंको नाममा स्थित हुन सक्दैन भने यसले कि लिलिगेसनको पछि लाग्ने मौका कम गर्न सक्छ। LLC गठन र सीमित दायित्व कम्पनीहरूको नाममा सम्पत्ति राख्नु तपाईंको विरुद्ध र उनीहरूको वैचारिक कानूनी क्रियाकलापको बीचमा क्लोक गोपनीयता प्रदान गर्न सक्छ। यो गोपनीयतालाई बढाएको छ जब "उम्मेदवार" प्रबन्धकहरू सूचीबद्ध हुन्छन्। कम्पनीहरु संग Nominee गोपनीयता सेवा शामिल हो, तपाईं स्वामित्व र आफ्नो कम्पनी को नियंत्रण बनाए राख्नुहोस। तथापि, तपाईंले कम्पनीहरू छनोट गर्नुभयो सार्वजनिक रेकर्डमा सूचीबद्ध गर्न प्रतिनिधिहरू (जसलाई तपाइँको गठन LLC को स्वामित्व वा स्वामित्व छैन)।
LLC निगम र LLC गठनमा उपलब्ध पूंजीको एक ठूलो स्रोत साझेदारी वा मालिकत्व भन्दा बढी छ। किनभने LLC बनाउनु मालिकहरूबाट अलग छ, मानिसहरू पैसा लगानी गर्न कम्पनीको व्यापारको लागि जिम्मेवारी वा जिम्मेवारी स्वीकार्न इच्छुक हुन्छन्। धनी अमेरिकियों को फोर्ब्स 400 सूची उन व्यक्तियों देखि भरा हो जो कम्पनी या उनको परिवार को सदस्यहरु को शुरूवात स्वामित्व मार्फत आफ्नो धन को उच्चतम प्रतिशत बनाए। धेरै एकल स्वामित्व वा साझेदारी व्यवसायहरू एक देखि दुई पटक वार्षिक आयको लागि बेचीन्छ। तर, धेरै कम्पनीहरू 12 देखि 25 पटक वार्षिक आय वा अन्य बीचको मूल्यवान छन्।
अलग कानूनी इकाई स्थिति
किनकि तपाईं र तपाईंको LLC शामिल दुई अलग कानुनी संस्थाहरू छन्, तपाईंको कम्पनीको विरुद्ध ल्याईएको कानुनहरू व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई असर गर्न आवश्यक छैन। जब तपाईंको सीमित देयता कम्पनी पैसा बोल्छ, त्यहाँ त्यस्ता उपायहरू छन् जुन तपाईं व्यक्तिगत रूपमा ऋण फिर्ता गर्न उत्तरदायी हुनुहुन्न। LLC बनाउँदै मालिकको जीवन पछि बनी। तथापि, एकमात्र मालिकत्व मालिकको जीवन पछि अवस्थित छ।
शक्तिहरूको विस्तृत दायरा
एक LLC गठन गर्दा कुनै पनि कानूनी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छ, तर निम्नमा सीमित छैन:
एक LLC बनाउन को लागी प्राधिकरणको साथ कुनै पनि वास्तविक र व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई छुट्याउन वा खरिद गर्ने वा पट्टि वास्तविक सम्पत्ति र व्यक्तिगत सम्पत्ति, खरीद र वितरण गर्ने शक्ति छ। एक LLC समावेश मा कुनै पनि राज्य, क्षेत्र वा देशमा वास्तविक र व्यक्तिगत सम्पत्ति को लागी शक्ति हो।
ठेक्का बनाउन शक्ति छ।
मालिकको मृत्यु पछि पनि लगातार अवस्थित हुन सक्छ।
यसको व्यापारको लेनदेनको लागि आवश्यक हुँदा, वा यसको कम्पनीको अधिकार, विशेषाधिकार वा फ्रान्जिजाइजिजको अभ्यासको लागि वा यसको गठनको कुनै अन्य वैध उद्देश्यको लागि पैसा उधार लिने शक्ति छ।
LLC र LLC गठन गठन गर्दा बांड, प्रत्याशित नोटहरू, विनिमयको बिलहरू, डिबेंचरहरू, र अन्य दायित्वहरू र अनिश्चितताको प्रमाण, एक निश्चित समय वा समयमा भुक्तानीयोग्य, वा निर्दिष्ट घटना वा कार्यक्रमहरू हुन सक्दछन्, के द्वारा भुक्तानी गर्न सक्छ कि? बंधक, प्रतिज्ञा वा अन्यथा, असुरक्षित, उधारिएको रकमको लागि, वा खरिद गरेको खरीद, वा अधिग्रहणको लागि भुक्तानीमा, वा कुनै अन्य वैध वस्तुको लागि भुक्तानी।
LLC निगम र LLC समावेशीकरण को कानून या इक्विटी को कुनै अदालत मा मुकदमा र मुकदमा गर्ने शक्ति छ।
कम्पनीको कामका लागि आवश्यक पर्दछ र तिनीहरूलाई उपयुक्त मुआवजा दिन अनुमति दिने जस्ता अधिकारीहरू र एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने शक्ति छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, वा राज्य जो एलएलसी गठन भएको हो, यसको प्रबन्ध र नियमन र सरकारको सरकार, यसको शेयर को स्थानान्तरण को लागी संविधानको कानुनी वा कानुनी कानुनसँग असंगत छैन। यसको व्यवसाय को लेनदेन, र कलिंग र यसको शेयरधारकों को बैठकहरु को पकड।
हावा उठाउन र आफैलाई भंग गर्ने क्षमता छ, वा घाँटी वा भंग गर्न।
एक कम्पनी मुहर वा स्ट्याम्प को लागी र प्रयोग गर्न को लागी शक्ति छ, र खुशी मा उस्तै परिवर्तन।
ग्यास, खरीद, होल्ड, बेइजिङ, असाइन, ट्राफिक, बंधक, प्रतिज्ञा वा अन्यथा सदस्यताको इकाइको निषेध गर्ने, वा कुनै बान्ड, प्रतिभूति वा कुनै पनि अन्य कम्पनी द्वारा बनाईएको अनिश्चितता को सबूत को शक्ति छ, जस्तै एकाइ, बांड, प्रतिभूति वा निस्सन्देहका सबूतहरू, सबै अधिकार, शक्ति र स्वामित्वको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न, मतदान गर्ने अधिकार सहित, यदि कुनै पनि।
केसँग खरीद, होल्ड, बेच्न र आफ्नो सदस्यताको ट्राफिक एकाइहरू को शक्ति छ, र यसैले यसको पूंजी, पूंजी अधिशेष, अधिशेष, वा अन्य सम्पत्ति वा कोष प्रयोग गर्नुहोस्।
धेरै व्यवसाय, क्षेत्र, सम्पत्ति र संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलम्बिया जिल्ला, र कुनै पनि विदेशी आश्रय मध्ये कुनै पनि मा एक व्यवसाय को संचालन गर्न को लागी शक्ति छ, एक या अधिक कार्यालयहरु छ, र पकड, खरीद, बंधक र वास्तविक र व्यक्तिगत सम्पत्ति देशहरु लाई कानून द्वारा अनुमति दिइएको छ।
सामान्यतया सबैलाई आवश्यक र सबैलाई आवश्यक र उचित आवश्यक छ र उचित प्रमाणपत्र वा संस्थाको लेख, वा कुनै परिमार्जन, वा सामान्य वा LLC को सुरक्षा र लाभको लागि अनिवार्य वा अप्रत्यक्षमा गणना गर्न को लागी उचित कुनै पनि वैधानिक व्यापारलाई LLC को वस्तुहरु लाई प्राप्त गर्न आवश्यक वा अप्रत्यक्ष, चाहे कि यस्तो व्यवसाय प्रकृति को समान कम्पनी को संगठन को लेख या लेख मा उल्लिखित वस्तुहरु को रूप मा समान छ, या यसको कुनै संशोधन।
सार्वजनिक कल्याणका लागि वा धर्मार्थ, वैज्ञानिक वा शैक्षिक उद्देश्यका लागि दान बनाउन शक्ति छ।
कानून अनुसार अनुमति हुन सक्छ कुनै पनि कानूनी गतिविधिको सम्बन्धमा साझेदारी, सामान्य वा सीमित, वा संयुक्त उद्यमहरूमा प्रवेश गर्न शक्ति छ।
साना दावी न्यायालय
एक सीमित देयता कम्पनीले कम्पनीलाई धेरै साना दावी अदालतहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न एक अधिकारी, अधिकारी, निर्देशक वा कर्मचारी पठाउन सक्छ। एकमात्र मालिकत्वको विपरीत, यसले मालिकको समय व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न मुक्त गर्न सक्छन् जब कर्मचारीहरूले कानूनी मामलाहरूको हेरविचार गर्छन्।
कर्पोरेट ऋणहरूका लागि अलग दायित्व
एक LLC र LLC गठन गठन गर्दै तिनीहरू आफ्नैबाट अलग छन्। यदि कम्पनीले मुकदमा गुमाउँछ वा ऋण लिन्छ भने यो रकम तिर्न सक्दैन, LLC बनाउन वा LLC गठन आफै जिम्मेवार छ। सीमित दायित्व कम्पनीले सदस्य र प्रबन्धकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्न एक बलियो ढाल प्रदान गर्न सक्छ। यसको विपरीत, एकमात्र स्वामित्व वा साझेदारीको साथमा, मालिकहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति गुमाउन व्यवसायिक मुक्तिमा गुमाउन सक्छन्। यदि सदस्यहरू र / वा प्रबन्धकहरूले व्यक्तिगत रूपमा कर्पोरेट कर्जाको ग्यारेन्टी गरेका छन्, निस्सन्देह, तिनीहरू उत्तरदायी हुन सक्छन्। यसको अतिरिक्त, एक LLC गठन गरिनु पर्छ कानूनी ढाल को लागि ठीक रहन को लागी र ठीक तरिकाले संचालित गरे। अधिकतम सुरक्षाको लागि, LLC निगमलाई एक अलग कानुनी निकायको रूपमा व्यवहार गर्न कानूनी रूपमा अभिकर्ता गरिएको छ। उदाहरणको लागि, कम्पनीको पैसाको साथ कम्पनी खर्च तिर्न महत्त्वपूर्ण छ (वा निश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाईले व्यक्तिगत रूपमा भुक्तानी गर्नुभयो भने कम्पनीले तपाइँको खर्चको लागि तुरुन्तै प्रतिपूर्ति गर्दछ)। बखत, तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत बिजुलीको बिल कम्पनी कम्पनी पैसा तिर्न सक्नुहुन्न। बरु, कम्पनीले तपाईलाई कम्पनीको चेक खाताबाट वेतन भुक्तानी गर्दछ (जुन कम्पनीको लागि कर-कटौती हो)। तपाईं आफ्नो वेतन जाँच आफ्नो व्यक्तिगत जाँच खातामा जम्मा गर्नुहोस् र आफ्नो व्यक्तिगत बिजुली बिल तिर्नका लागि ती रकमहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
के मलाई दुई सदस्य चाहिन्छ?
धेरै राज्यहरूले एकल सदस्य LLC निर्माणको लागि अनुमति दिन्छ। अन्य राज्यहरूलाई दुई वा बढी सदस्यहरू चाहिन्छ। यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि आईआरएस एक सदस्य संग एक LLC को विभिन्न कर देनदारहरु लाई लागी एक सदस्य संग (एक निगम या कर प्रयोजनों को रूप मा टैक्सर्ड को लागी टैक्स) को तुलना मा एक देखि अधिक सदस्य संग LLC (पूर्वनिर्धारित द्वारा साझेदारी को रूप मा टैक्स )।
के मैले LLC बैठकहरू राख्नुपर्छ?
धेरै देशहरूमा, एक LLC ले साधारण सदस्य / प्रबन्धक बैठकहरू आवश्यक पर्दैन जुन दायित्वको बिरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न को लागी अधिकारीहरू / निर्देशकहरू र निगमका शेयरधारकहरू आवश्यक पर्दछ। उदाहरणका लागि, क्यालिफोर्नियाले सदस्य / प्रबन्धक सभाहरूको आवश्यकता पर्दैन जब सम्म LLC को संगठनका लेखहरूलाई विशेष गरी उनीहरूको आवश्यकता पर्दछ
LLC मा कसले छनोट गर्छ?
अधिकतर अवस्थामा, मतदानको अधिकार सदस्यताको प्रतिशत ("स्वामित्व") को अनुपात आनुपातिक हुन्छ। तथापि, संगठन वा अपरेसन सम्झौताका लेखहरूले मतदानको अधिकारको लागि फरक मापदण्ड स्थापित गर्न सक्छ
के म सदस्य शेयरहरू बेच्न सक्छु?
सामान्यतया, सदस्य शेयरहरू केवल ब्याजमा बहुमत लिने सदस्यहरूको अनुमोदनमा बेचेको हुन सक्छ, जबसम्म अन्यथा संगठन वा अपरेसन सम्झौताका लेखहरू द्वारा निर्धारित हुँदैन।
एलएलसी कतिन्जेल सहन सक्छ?
धेरै देशले अब एलएलसीलाई निरन्तर अस्तित्वको अनुमति दिन्छ। अतीत LLC मा एक मिति प्रदान गर्न आवश्यक थियो जसमा LLC को अस्तित्व समाप्त हुनेछ। अधिकतर अवस्थाहरूमा, अन्यथा संस्थाको लेख वा लिखित अपरेन्टिङ सम्झौतामा प्रदान नभएसम्म केही अपवादहरूको साथमा मृत्यु, फिर्ता, इस्तीफे, वा सदस्यको दिवालियापनमा एक LLC निलम्बित गरिएको छ।
के मलाई अपरेटिङ सम्झौता चाहिन्छ?
हो, LLC को निर्माण पूर्ण एक अपरेटिङ करार को ड्राफ्ट समावेश गर्दछ। अपरेटिङ करार, या त पूर्व वा सिधै संगठनको आलेखको दाखिल पछि सिर्जना गर्नु पर्छ। एक परिचालन सम्झौता हुन सक्छ मौखिक वा लिखित।
LLC बनाउनका लागि कुन कागज कार्य आवश्यक छ?
संगठनका लेखहरू कानूनी रूपमा मस्यौदामा र राज्य कार्यालयसँग दायर गरिनु पर्दछ। शुरुवात शुल्क पनि यस समयमा तिर्नुपर्छ।
LLC को नुकसानहरू के हो?
त्यहाँ कुनै विश्वसनीय निरन्तरता छैन। यदि सदस्य खारेज गरिएको छ, मर्छ, असक्षम पारिएको छ वा इस्तीफा गर्दछ भने, LLC जबरन नभएसम्म संगठन वा अप्ठेरो सम्झौताका लेखहरूले अन्यथा राज्य बनाउँदछ। जब एलएलसी गठन हुन्छ, केहि राज्यों को आवश्यकता छ कि LLC को भविष्य को विघटन को लागि एक तारीख दर्ज गरिनेछ। अर्कोतर्फ, एक निगम मृत्यु, असक्षमता वा निर्देशक (हरू) वा अधिकारी (हरू) को बर्खास्त गर्ने घटनामा एक संस्थाको रूपमा अवस्थित हुनेछ। त्यहाँ सिर्जना LLC मा पेपर कार्य को एक ठूलो सम्झौता। कम्पनीले यो प्रक्रियालाई सम्भव बनाउनुको साथै छिटो र कुशलको रूपमा गर्व गर्दछन्। यदि तपाईं LLC लाई विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया हामी कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छलफल गर्न हाम्रो सहभागीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मैले मेरो LLC मा कुन राज्य बनाएको छु?
यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि धेरै कारकहरु को सावधान विचार साबित हुन्छ। जब तपाईं आफ्नो निवासको स्थितिमा समावेश गर्न आवश्यक छैन भने, तपाईंले चीजहरू जस्तै अन्य निगममा एक विदेशी निगम वा LLC को रूपमा समावेश गर्नका लागि लागतहरू विश्लेषण गर्नुपर्दछ, तपाईंको सुविधाको भौतिक स्थान, यदि कुनै हो, र के सावधान समीक्षा तपाईंको आफ्नै भन्दा सट्टा अन्य राज्यमा समावेश गर्ने फाईनहरू प्रदान गर्दछ।
शुल्क, नियमहरू र कर्पोरेट शासकीय नियमहरू राज्य-राज्यबाट फरक हुन्छन्, अधिकार र विशेषाधिकारहरू सदस्यहरू, सदस्यहरू, निर्देशकहरू र बोर्डहरू प्रबन्ध गर्ने जस्ता छन्। यो सामान्यत: सरल र अधिक लागत प्रभावी छ तपाईंको गृह अवस्था वा आवासको राज्यमा LLC बनाउन, विशेष गरी यदि तपाईंको LLC मुख्य रूपमा केवल एक राज्यमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछ। तपाईंको गृह राज्यमा एलएलसी गठन गरिनु पर्ने रकम घटाउनेछ र LLC लाई विदेशी दाखिला आवश्यकताहरु र शुल्कको अधीनमा राख्नु हुँदैन। तथापि, त्यहाँ केहि धेरै वास्तविक फाइदाहरू छन्, तपाईंले सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसाय र तपाइँका फाइदा लिन चाहने व्यवसायको आधारमा निर्भर गर्दछ, जब अन्य राज्यहरूमा डेल्भियर र नेवाडा समावेश गर्दछ।
कुनै पनि राज्यमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा, तपाईं वा तपाईंको व्यवसायमा समावेश गरिएको छ, तपाइँलाई विशेष राज्यको लागि "विदेशी योग्यता" फाइल गर्न आवश्यक पर्दछ, जसले फीस र कागजी कार्यलाई वृद्धि गर्नेछ (जस्तै तपाइँको निगम डेलावेयर तर तपाईं कैलिफोर्नियामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहानुहुन्छ, क्यालिफोर्नियालाई विदेशी योग्यता चाहिन्छ) - एक ठूलो बाधा, विशेष गरी यदि व्यापार मात्रा थप खर्च को वारंट गर्न को लागी, तर निश्चित रूप देखि विचार को योग्य। एक विदेशी निगम वा LLC, एक पटक अर्को व्यवसायमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि विचार गर्नुहोस्, फ्रान्जिस्टी कर र वार्षिक प्रतिवेदन दुवै राज्यको समावेशीकरण राज्य र अधिकांश उदाहरणहरूमा योग्यता राज्यको शुल्क हो। धेरै कम वा कुनै कर्पोरेट आयकरको साथ एक राज्यमा LLC बनाउन को लागी फ्याँकिएको छैन किनकि यो केहि उदाहरणहरुमा देखा पर्न सक्छ।
त्यो भनिएको छ, हामीलाई मन पर्छ Wyoming LLC कुनै पनि अन्य राज्य भन्दा बढी। Wyoming एक-सदस्य सदस्य LLC ले जब व्यक्तिले LLC सदस्यलाई स्वीकारेमा कानुनी सुरक्षाबाट सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्दछ। यो दुई अधिक लोकप्रिय विकल्पहरू, डेलावेयर र नेभाडा भन्दा वार्षिक आधारमा पनि कम लागतको छ।
डेलावेयर वा नेभाडामा LLC गठन गर्ने बारे विचार
किनकि डेलावेयर र नेवाडा आम तौर पर प्रो-व्यवसाय हो र धेरै प्रकार को व्यवसायहरुको लागी उपयुक्त छ कि राज्यहरु को रूप मा मान्यता प्राप्त गरिन्छ, "विदेशी संरचना" को आकर्षित गर्छन।
डेलावेयर धेरै द्वारा एक कॉर्पोरेट हेवन माना जाता छ, र त्यहाँ "आधुनिक" र निगमका शासकहरूलाई लचीला कानुनको रूपमा मानिन्छ, साथै त्यहाँ धेरै व्यवसायिक-अनुकूल हुन सकिन्छ। जस्तै, कर्पोरेट र एलएलएल अनुप्रयोगहरू प्राथमिक सेवाको रूपमा देखिएका छन्, उत्कृष्ट सेवाको साथ र स्थानीय सरकारी कर्मचारीहरूले प्रायः अन्य राज्यों भन्दा बढी भन्दा छिटो उपलब्ध गराउन सक्षम हुन्छन्। सार्वजनिक रूपमा व्यापारिक कम्पनीहरूको आधा भन्दा बढी र फॉर्च्यून 58 कम्पनीहरूको 500% भन्दा बढी डेलावेयरमा यी ठूला कर्पोरेटहरू, विशेष गरी ती व्यक्तिहरू "सार्वजनिक जान्छन्," वा खुला बजारमा स्टक बेच्नका लागि समावेश छन्।
केही लाभहरू समावेश छन्:
कम प्रारम्भिक समावेश वा LLC गठन लागत
डेरावेयर मा शामिल निगमहरु को लागि कुनै कर्पोरेट आयकर मा राज्य मा कारोबार को लेनदेन नहीं।
एक अलग कानूनी अदालत प्रणाली को चैनरी को डेलावेयर न्यायालय को जूता को उपयोग गर्दैन, तर कर्पोरेट कानुनी निर्णयहरु संग काम गर्न को लागी कर्पोरेट कानून को ज्ञान को लागी न्यायाधीश को उपयोग गर्दछ।
एक व्यक्तिले निगमको सबै अधिकारी पदहरू समात्न सक्छ, र यी नामहरूलाई समावेशीकरणका लेखहरूमा सूचीबद्ध गर्न आवश्यक छैन।
शेयरधारकहरू, निर्देशकहरू, र निगमका अधिकारीहरूले डेलावेयरका बासिन्दाहरूलाई चाहिँदैन।
डेलावेयर को बाहिर व्यक्ति द्वारा स्वामित्व वाला स्टक को शेयर डेलावेयर करों को अधीन नहीं हो।
नेवाडा राज्यको कमीको लागि उल्लेखनीय छ। कर्पोरेट आयकर र व्यक्तिगत आयकर-यो कराधान प्रमुख विचार हो भने यो वरदान हुन सक्छ। यसले कर्पोरेटहरू र उनीहरूको शेयरधारकहरूको लागि ठूलो स्तरको गोपनीयताको लागि अनुमति दिन्छ। जस्तै, नेवाडा क्यालिफोर्निया र अन्य पश्चिमी अमेरिकी राज्यहरूमा स्थित निगमहरूको लागि अनुकूल हुन सक्छ। जबकि कुनै पनि सार्वजनिक निगमले नेवाडाको लचीला नियमबाट लाभ उठाउन सक्छ, नेभाडा निजी निजी-निगमका निगमहरूको लागि आकर्षक छ, किनभने यसको नियमको पूर्वनिर्धारित प्रावधानहरू जसले अनुकूल व्यवस्थापनको पक्षमा राख्दछ। डेरावेयर मा एक निगम बनाउन को लागी मामला छ, नेवाडा मा निगमहरु को गठन को आलोचकहरु लाई विश्वास गर्दछ कि यसको कानुन र अदालतहरु को निगमहरु लाई अधिकतर अनुकूल छ।
नेवाडा निगमको निर्माणको फाइदाहरू:
एक निगमको कामहरू प्रबन्ध गर्न निदेशक बोर्डको लागि लचीलापन,
दुश्मन अधिग्रहणबाट बलियो सुरक्षा राख्ने व्यवस्थापनलाई अनुमति दिँदै।
त्यो राज्यमा अदालतहरू अधिकतर अन्य अदालतहरूको अदालतको तुलनामा कर्पोरेट कानूनको आवेदनमा बढी ध्यान केन्द्रित छन्
नेवाडाको अदालतले कानुनको बलियो निकायलाई विकास गर्दैछ जसले निगमहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ र कर्पोरेट प्रशासनको विषयमा उनीहरूको सल्लाह निर्देशन दिन्छ।
नेवाडाको कर संरचना पनि नेभाडामा समावेश गर्न ठूलो लाभ हो। नेभाडाको फ्रैंचाइज कर छैन। यसमा कुनै कर्पोरेट आयकर वा व्यक्तिगत आयकरको पनि छैन।
नेवाडा निगमहरूको आन्तरिक सम्बन्धहरूमा विवादहरू नेवाडा राज्य जिल्ला न्यायालयमा दायर गरिएको छ, र नेवाडा स्टेट सुप्रीम कोर्टमा अपील गर्न सकिन्छ।
1992 को अक्टोबरमा, डेलावेयर कानूनले सीमित दायित्व कम्पनीहरू (LLC) लाई मान्यता पाएको छ र रश मा थियो। नामको रूपमा, सीमित दायित्व कम्पनीको गठनले सदस्यहरूलाई सीमित दायित्व सुरक्षा र निश्चित कर फायदाहरू प्रदान गर्दछ, विशेष गरी व्यवसाय र डेरावेयरको कर्पोरेट-अनुकूल अवस्था। र फॉर्च्यून 500 कम्पनीहरू सहमत हुन्छन् कि-क्वेन्च 500 कम्पनीहरूको भन्दा बढी आधा डेलावेयरमा समावेश गर्न छनौट गर्दछ। डेल्वायरको सानो राज्यको नाममा व्यवसायी भवनको बीचमा ठूलो कारोबार हो जुन ठूलो कर्पोरेटहरू र LLCहरूलाई व्यवसायिक अनुकूल अनुकूल वातावरण खोज्न सकिन्छ जुन अदालत र प्रणालीहरू कहिलेकाहीँ जटिल-जटिल कर्पोरेट संसार बुझ्न सकिन्छ। यस राज्यको आकर्षणको एक ठूलो भाग यो तथ्य हो कि राज्यले राज्य भित्र काम नगरेको कम्पनीहरूमा कुनै कर्पोरेट आयकरको शुल्क छैन, तथापि सबै डेलावेयर निगमहरू र LLC ले वार्षिक वार्षिक फ्रांसीसी फ्रान्सेली कर तिर्नुपर्छ। डेलावेयरका नियमहरू (जस्तै डेल्भियर जनरल कर्पोरेट कानुन) को डिजाइन गरिएको थियो कर्पोरेट ढाँचा र अपरेसनमा अधिकतम लचीलापन। LLC को थप लचीलापन संग, एक डेल्वियर मा LLC को निर्माण को आवेश को देखने को लागी शुरू गर्न सक्छ। डेलावेयर मा LLC बनाउन पनि व्यापार ऋण र कानुनी रकम, सम्भावना कराधान लाभ, गोपनीय वृद्धि, र व्यापार लचीलापन बढेको देखि सदस्यहरु लाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यदि त्यहाँ कारकहरू तपाईंको र तपाईंको व्यवसायमा लागू हुन्छन् भने डेल्भियरले तपाइँको कम्पनीको लागि उपयुक्त सर्वोत्तम निर्णय गर्ने निर्णय गर्नु अघि विचार गर्नुपर्दछ, त्यसपछि डेलावेयरमा तपाइँको LLC बनाउन तपाईले तपाइँको र तपाईंको लागि पर्याप्त लाभ प्रदान गर्न सक्छ। कम्पनी।
विचार गर्ने कारकहरू
एक LLC साझेदारी को स्वामित्व को लाभ र लचीलापन प्रदान गर्दछ, जबकि एकै समयमा एक निगम को सीमित दायित्व र सम्पत्ति संरक्षण को पेशकश मा। यस सीमित दायित्व संरक्षण को अतिरिक्त, एक LLC को गठन देखि garnered को लागि पर्याप्त कर फायदे पनि छन्। एक डेलावेयर LLC लाई कम्तिमा एक सदस्यको लागि अनुमति दिन्छ वा तपाईंको कम्पनीको रूपमा धेरै सदस्यहरू, संख्याहरूमा कुनै सीमा छैन, र स्टक प्रकारको सम्बन्धमा कुनै सीमा छैन। कम्पनीले एक प्रबन्धक सदस्य चयन गर्नु पर्छ जुन सामान्यतया संगठनको अङ्कको प्रमुख हो र यसको व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार छ। व्यापार संगठनको मुनाफा वा हानि सीधा सदस्यको व्यक्तिगत आयकर रिटर्न ("कराई मार्फत पास") मा जानुहोस्, LLC स्तरमा कुनै कराधानको साथ। LLC को शुद्ध मुनाफा सदस्यहरु द्वारा आय अर्जित गरेन (को लागी यो एक विशेष "फ्रिंग फायदा" उपचार को रूप मा - देख्न को लागी यो हुन सक्छ को लागी हुन सक्छ), र यसैले स्व-रोजगार को लागी कर अधीन छैन।
एकपटक एलएलसी गठन गर्ने छनौट गरेपछि, यो आवश्यक छ कि एक राम्रो लेखिएको अपरेटिङ एन्टिभरेसनले ड्राफ्ट गरीएको छ जुन सदस्यहरु को वितरण विधि, अधिकार र फाईदाहरु र प्रबन्धक सदस्य, पूंजीकरण र कुनै अन्य अधिकार, कर्तव्य, एलएलसीको उचित अपरेसनका लागि आवश्यक जिम्मेवारीहरू। अपरेटिङ करार निगमको बागलुङमा तुलना गर्न सकिन्छ, जहाँ ठीकसँग लिखित एक हो, र यसको सट्टा अनुयायी, LLC को "कर्पोरेट पर्दा" सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
एक LLC को प्रायः उल्लिखित लाभ यो हो कि यो एक नै अधीनमा छैन, कडा कर्पोरेट औपचारिकताहरु जुन सी वा एस निगमको विषय हो। LLC स्थापित गर्न र चलाउन यो सरल हुन सक्छ, प्रदान गरिएको छ कि गुणस्तर, राम्रो लेखिएको अपरेटिङ एन्टिभेसन हो।
व्यावसायिक ज्ञानयोग्य न्यायालयहरू
एक प्राथमिक कारण मध्ये डेलावेयर एक माना जाता है व्यापार को रूप मा समझ को कारण हो किनभने उनको अदालत प्रणाली निगमहरु को समझ र उपचार मा धेरै परिष्कृत छ। त्यस राज्यको अदालतले सामान्यतया अन्य राज्यहरूको तुलनामा कर्पोरेट कानूनको आवेदनमा बढी अनुभवीको रूपमा मानिन्छ, मुख्य रूपले त्यहाँ कम्पनीको सङ्ग्रह संख्याको उत्पादन द्वारा उत्पादित। डेलावेयर निगमहरूको आन्तरिक सम्बन्धहरूमा विवादहरू प्राय: चान्सरीको अदालतमा दायर गरिएका छन्, जुन कुनै पनि युएस युनिभर्सिटीको इभिटिटीको (अलग "कानून" को रूपमा) हो। इक्विटीको अदालत हुनु, त्यहाँ कुनै सतावट छैन, र यसको घटना न्यायाधीशको (या "चांसलर") द्वारा निर्णय गरिन्छ। यी चालकहरूले जटिल कॉर्पोरेट लेनदेन र मेन्डरिंग्सको "इन्स र बहिष्कार" को बारेमा जान्दछन् र यसैले त्यस्ता मुद्दाहरूमा परिष्कृत निर्णयहरू प्रदान गर्दछ जुन सामान्य नागरिक अदालतहरू बग्न सक्छ। किनभने चान्सरीको न्यायालयले पैसा हानि पुऱ्याउन सक्दैन, डेलावेयरको सुपीरियर कोर्ट, सामान्य अधिकार क्षेत्रको परीक्षण अदालत पनि पैसाको लागि दाबी गर्ने निगमहरूको बीचमा ठूलो संख्यामा सुनेका छन्। अन्ततः, डेलावेयरमा समावेश गर्न रोजगारीको संख्याको कारण, राज्यमा संघीय दिवालियापन अदालतले धेरै उच्च अपमानजनक मामिलामा निलम्बित गर्दछ, र डेलावेयर जिल्लाको संयुक्त राज्य जिल्ला जिल्ला डेलावेयर निगमहरूको बीचमा धेरै पेटेंट विवाद देखाउँछन्।
1980s मा, डेल्भियर गभर्नर पियरे सैमूएल डु पन्ट IV ले डेल्वायर जनरल विधान सभाको माध्यमबाट वित्तीय केन्द्र विकास अधिनियमलाई गोर्खा गर्यो। डेलावेयर मा लगभग सबै राजतन्त्र नियमहरु लाई मेटाउन को लागी कार्य को साधन थियो, किनकि बैंक डेलावेयर मा क्रेडिट कार्ड सहायकहरुलाई शुरू गर्न को तत्काल प्रोत्साहित दिदै संघीय कानून प्रदान गर्दछ कि ग्यारह सीमाहरु, या उनको कमी को एक बैंक को घर राज्य को सीमित जहाँ बैंकले व्यापार सञ्चालन गर्दछ। यसले उपभोक्तालाई कर्जाको विभिन्न स्तरको लागि विभिन्न दरहरू संग क्रेडिट कार्डहरू जारी गर्न बैंकको प्रतिस्पर्धामा एक विस्फोटलाई प्रोत्साहित गर्यो। र डेलावेयर को ब्याज दर को चार्ज को न्यूनतम विनियमन को कारण, बैंकों को उच्च ब्याज दर कार्डहरु को उच्च जोखिम वाला उपभोक्ताओं को जारी गर्न सक्षम थिए।
डेलावेयर LLC बनाउनका फाइदाहरू र फाइदाहरू
दायित्व देखि सम्पत्ति संरक्षण। डेलावेयर LLC सदस्यहरूले मात्र सीमित दायित्वको आनन्द लिन्छन्, जसको अर्थ उनी प्रायः LLC र सफल निर्णयको कुनै पनि दायित्वबाट सुरक्षित छन् र साथसाथै LLC मात्र सुरक्षित छन्। युगलले कर्पोरेट कानूनमा उनीहरूको अनुभवको साथ दक्षता र निष्पक्षताको लागि व्यवसायिक अदालतको प्रतिष्ठाको साथ, र लाभ एकदम स्पष्ट हुन्छ।
व्यापार र निगम जानकार अदालत प्रणाली।
बैंकिङ-अनुकूल प्रयोगका नियमहरू।
कर लाभ। डेलावेयर शुल्क राज्य भित्र काम गर्दैनौं कम्पनीहरूमा कुनै कर्पोरेट आयकर, यद्यपि सबै डेलावेयर निगमहरूले वार्षिक कर्पोरेट फ्रांजिज गरेर भुक्तानी गर्नुपर्छ।
एक डेलावेयर LLC "बहु-तहगत स्वामित्व" को लागि अनुमति दिन्छ जसमा एस या सी निगम एक सदस्य हुन सक्छ - यसले पर्याप्त कर फायदे को लागि अनुमति दिन सक्छ, र अधिक दायित्व संरक्षण मा वृद्धि गर्न सक्छ।
डेलावेयर "एकल सदस्य" LLC को लागि अनुमति दिन्छ।
एलएलसीले "विशेष आवंटन" मुनाफा को लागि अनुमति दिन्छ - सदस्य मुनाफा र घाटा को असामान्य विभाजन (स्वामित्व को उनको प्रतिशत प्रतिशत भन्दा अलग मा)। यसको मतलब यो सदस्यले उनीहरूको व्यक्तिगत स्वामित्व प्रतिशत भन्दा अधिक लाभ (र हानि बन्द गर्ने) प्राप्त गर्नका फाइदा उठाउन सक्दछन्, त्यसोभए यो रूपमा स्पष्ट रूपमा अपरेटिङ अनुबंधमा वर्णन गरिएको छ।
एक सदस्यको रूपमा, तपाईं LLC मा राजधानी वा अन्य सम्पत्तिहरू योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, वा व्यापारमा डलर वा मूल्य राख्न LLC पैसा लिनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो ऋण (अधिक ब्याज), लाभ को एक वितरण वा एक भुक्तानी भुक्तानी लिने गरी डलर बाहिर लिन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै सदस्यहरू मर्छन् भने, LLC अस्तित्वमा रहन सक्दछ - सबै बाँकी सदस्यहरू वा अपरेटिङ करारमा प्रोसेसरको समानुपातिक सकारात्मक मतको अधीनमा रहनेछ।
कर लाभ। डेलावेयरले LLC र साझेदारीको कराधान मार्फत पारित गर्न अनुमति दिन्छ, र व्यक्तिगत, कर्पोरेट, सूची, फ्रान्चाइज, उपहार, व्यापार व्यवसाय वा स्टक ट्राफिक करहरू सङ्कलन गर्दैन। र कराधान को संघीय "चेक बक्से" विधि संग, डेलावेयर LLC "सहज पारित" संग भागीदारी मोडेल को माध्यम ले टैक्स गर्न को लागी चुन सकते हो। यसले व्यवसायको लागि पर्याप्त बचत गर्न सक्छ।
डेलावेयर LLC एक सतत जीवन छ र सदस्यता सजिलै स्थानान्तरण योग्य छ। यदि वैकल्पिक परिस्थितिहरू आवश्यक भएमा सदस्यको सम्झौतामा प्रवेश गर्न सल्लाहकार छ।
डेलावेयर LLC शुल्क र लागत
एक $ 60 राज्य फ्रान्चिस शुल्क को अनुसार, शेयरहरूको संख्या र मूल्यको आधारमा, LLC हरू र अधिक सीमित साझेदारीहरू हरेक वर्ष $ 200.00 भुक्तान गर्छन्।
यदि एलएलसी विरुद्ध नै निर्णय दिइएको छ भने, यो लिफ्ट हुन सक्छ, र LLC को सम्पत्ति भुक्तानीमा भत्किएको छ वा बेचेको छ, त्यसमा निगमको व्यवहार गरिनेछ। तर, यदि एक विशेष सदस्यको विरुद्ध निर्णय गरिन्छ भने, र ठीकसँग लिखित अपरेटिङ सम्झौताको साथ यस्तो रूपमा वर्णन गर्दै, वितरण सामान्यतया बाध्यता हुन सक्दैन किनकि सदस्यको निर्णय ऋण (यसैले एक राम्रो तरिकाले तयार गरिएको सञ्चालन सम्झौताको लागि महत्त्वपूर्ण छ, तपाईं तपाईंको सुरक्षा को कम गर्न सकिन्छ)। क्रडिटर्स वा निर्णय देनदारले आफैलाई "चार्जिङ अर्डर" सँग सन्तुष्ट पार्नु पर्छ जुन निर्णयको नाममा एक विशेष सदस्यलाई LLC द्वारा बनाईएको अधिकारको अधिकार प्रदान गर्दछ। यसले तिनीहरूलाई त्यो वितरणको अधिकार दिन्छ, तर सम्पूर्ण सदस्यहरू वा LLC को अधिकार, सम्पत्ति, वा वितरणलाई असर गर्दैन। यी प्रकारका सुरक्षाहरू सम्भावित लगानीकर्ताहरूले LLC हरूको आकर्षणलाई चित्रण गर्छन्।
यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि डेलावेयर मा तपाईंको LLC बनाउन तपाईंको कम्पनीमा ठूलो व्यापार फाइदा प्रदान गर्न सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं राज्य वा अन्य क्षेत्राधिकारमा काम गर्न चाहानुहुन्छ भने। सम्भावित लगानीकर्ताहरू डेल्वायरमा व्यवसाय-सेवा अदालत र सामान्य निगम-अनुकूल कानुन द्वारा लागू सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षणमा आकर्षित हुन्छन्, र राज्यले दायित्व, सम्पत्ति संरक्षण, कराधान, र सुरक्षाबाट सुरक्षाको रूपमा ठूलो लाभ प्रदान गर्दछ। व्यापार लचीलापन। डेलावेयरमा तपाईंको LLC समावेश गर्ने वा बनाउनु तपाईंको कम्पनीलाई व्यवसायमा र लगानी-सोर्सिंगमा अधिक विश्वसनीय बनाउन बनाउन एक लामो बाटो हुनेछ।